Caafimaadka iyo Sayniska | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Joog utaxa kal-galka curiyayaasha ayaa loogu yeeraa ururo. Curiyayaasha isku ururka ah waxa ay lee yihiin astaamo is shabaha ama isku eg. Kal-galkan hoose waxa uu ina tusayaa urur 1 oo ay kamidka yihiin Liityam (Li), Naatariyam (Na) iyo Kaaliyam (K). Astaamaha urur 1 Ururka 1aad ee curiyayaasha waa biro. Waxa ay gudbiyaan korontada. Waa ay birbirqaan. Waa ay ka jilicsan yihiin inta badan biraha kale. Si fudud ayaa midi loogu kala jari karaa. Bar dhalaalka iyo bar karka urur 1 Curiyayaasha ururka 1aad waa ay ka bar dhalaal hooseeyaan marka lala barbardhigo biraha kale intooda badan. Jadwalkani …
Dr Susan Mackinnon waxay u baahatay caawimaad mar ay qalliin ku sameeyneysay neerfaha, waxayna nasiib wanaag heshay buug anatomy ah oo la qoray bartamihi qarniga labaatanaad. “Aad baan uga mahadcelinayaa sawirka cajiibka ee gacan ku sameyska ee aan buuggaasi ka helay ee muujinaya qaab dhismeedka jirka qofka” ayey tiri Dr Mackinnon, oo jaamacadda Washington wax ka dhigta waxayna sidaa ku dhammeysatay qalliinkeedi. Buugga qalliinkeeda gacanta ka siiyey ee ay isticmaashay ayaa wuxuu si cad u qeexayaa dhismaha jirka bani aadamka oo dhanwalba ah, buugaasoo noqday tusaalaihi ugu wanaagsanaa ee sawirrada jirka qofka laga qaadan karo. Sawirradana waa kuwa aad u …
Kaarboon: Xooga yar oo xaddi kaarboon ah ayaa laga helaa oogada sare ee dhulka. Waxaana loo heli karaa Dhaymon iyo Rasaas ahaan, kuwaas oo ah Jinsiyada kaarboon. Dheemmanku aad ayuu u adag yahay, waana adke nadiif ah oo lakala jabinkaro la iskuna cadaadin karo ayadoo la isticmaalayo dubbe. Rasaasku waa madow adke dufan leh. Dhuxusha iyo danbasku waa noocyo kamida Rasaaska, waxa ayna kasamaysmaan gubashada alwaaxda, dhuxul dhagax (dhulka hoostiisa ayaa laga qodaa) ama lafaha noolaha. Kaarboon labo oksaydh (CO2): Hawadu waxa ay ka kooban tahay 1% gaaska kaarboon labo oksaydh, xataa jiritaanka xadigaas yare e kaarboonka la’aantiis maanu …
Coronavirus ayaa dunida si xawli ah ugu soo baahaya mana jirto dawo illaa iyo hadda loo helay. Nasiib darro se taasi ma aysan joojin talooyinkii caafimaadka, oo isugu jira kuwa aan wax tar lahayn iyo xitaa kuwa kaba sii dareen khartar ah. Waxaanu eegeynay qaar ka mid ah sheegashooyinka ugu baahsan ee lagu wadaagay baraha bulshada, iyo waxa ka run ah marka la eega seyniska: 1. Toonta Qoraallo badan oo ku talinaya cunista toonta, si looga horgato fayraska Korona ayaa lagu wadaagay barta Facebook-ga. Hey’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, ayaa sheegeysa in inkasto oo ay tahay “cunto caafimaad leh haddana …
Maka daashay inaad xal u hesho hurdo la’aanta marka aad sariirta tagto? Halkan hoose ka akhriso shan qodob oo muhiim ah oo kaa caawinayo dhibaataas. 1. Marka hore waa in aad daalan tahay Waa Muhiim inJimicsi kugu filan aad sameyso maalin kasta balse iska ilaali inaad jimicsi samyeyso afarta saacadood ee ka horreysa xilliga jiifka sabatoo ah waxa uu kicinayaa Hormoonka adrenaline. Iska ilaali hurdada maalinkii haddii aysan hurdada kugu yareyn habeenkii, Seexashada maalinkii gaar ahaan wixii ka dambeeya afarta galabnimo waxay sababbtaa iney hurdada habeenki ay kuu gooyso ama aad weyso. 2. Ka warqab cuntada iyo cabitaanka aad isticmaasho …
Maxaa sababa in dumarka uurka leh ay raashinka qaar ku wallacaan? Waxay u badan tahay in jawaabta su’aashaas aysan ahayn waxa aad ku fakareysid hadda. Dhammaanteen waxaan maqalnaa sheekooyin ku saabsan haween uur leh oo jecel inay cunaan raashinka qaar cayiman oo kaliya. Qaar waxay mar walba u baahan yihiin jallaatada iyo khudaarta noocyo ka mid ah. Waxaa jira dumar raggooda habeen saqdhexe kaddib u dira bannaanka si ay ugu soo iibiyaan hilib digaag oo la shiilay, iyagoo sababta taas ku kallifeysana ay tahay inay raashinka noocaas ah ku wallaceen. Badanaa waxaa la sheegaa in wallaca uurka uu yahay baahi …
Cilmi-baadhayaal ayaa sheegay in dunida aysan isu diyaarinin taranka hoos u dhacay, taasoo bulshooyinka saameyn u geysaneysa. Taranka oo yaraada dabyaaqada qarnigan waxay dalal badan ku keeni doontaa tirada dadka waddamadaasi ku nool oo yaraata. 23 dal oo ay ka mid yihiin Spain iyo Japan ayaa la filayaa in marka la gaaro 2100-ka ay tirada dadka waddamadaasi ku nool kala badh hoos u dhacdo. Waddamo badanna waxaa ku soo badan doona dadka da’da ah ee 80 jirsada maadama ay dhaslashadu ku yartahay. Maxaa socda? Celcelis ahaan haweenka ilmaha dhalya ayaa si aad ah hoos ugu dhacay. Haddii uu hoos u …
Waa qayb kamid ah sayniska kaas oo qaabilsan geedi socodka kiimikeed iyo kiimiko duleed ee ka dhexdhaca walxada kujira noolayaasha. Kismisteri waa qayb kamid ah saynis duleedka kaas oo lagu barto falgalka, qaabdhismeedka, sifooyinka iyo isbadalka walxaha. Kimisterigu waxa uu si wayn u quseeyaa falgalka iyo isbadalka qurubyada iyo malakuyuulada tusaale ahaan, Sifooyinka dabarada kiimikeed ee ku samaysmay isku dhiska kiimikada. Barashada kiimikada ee la xariirta elektoroonada iyo kala duwanaashaha noocyada tamarta ee falcelinta footo kimikaalyada, falgalada ridhokiska, isbadalada wajiyada maatarka iyo kala saaritaanka isku dhiska, diyaarinta iyo sifooyinka walxaha qalafsan, sida biraha isku dhafan , caagaga, moleekuyuulada noolaha, …
Kiimiko duleed: Waa laan kamid ah laamaha kiimikada taas oo qusaysa adeegsiga farsamooyin iyo aragtiyo fiisigiseed si loo barto nidaamyada kiimikeed. Kiimiko duleedka marka la barbardhigo fiisikis duleedka, sida qaalibka ah waa wax la arki karo, sida inta badan ay ku tusayso aragtiyada la xariira. Kiimikada wax yaabaha la taaban karo waxay kusalaysan yihiin afkaaro la xariira qaab dhismeedka qurubka. Intii lagu guda jiray qarnigii 19aad, kiimiko duleedku wax ay door muhiim ah ka ciyaartay fikradii Wilhelm Ostwald’s iyo Jacobus Henricus van’t Hoff’s oo ka shaqaynayay isku dheelitirka kiimikooyinka. waxay sidookale door muhiim ah ka qaadatay aragtidii Svante Arrhenius …